Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Faallo » Hoosta Dhulka Nolosha Yuhuudda
dhaqanka • Faallo • Boostada martida • Dadka • Wararka Mareykanka • Wararka kala duwan
Faylasuufkii Jarmalka, Martin Buber
Dadka ku nool Bariga Yurub, gaar ahaan Poland iyo Ukraine, waxay ahaayeen faqiir, inta badan aan wax baran, oo aan lahayn habdhaqan iyo xariifnimo ay leeyihiin dadka reer Galbeedka Yurub. Sababtoo ah kala duwanaanshahaas weyn awgeed, waxgaradka reer Galbeedka Yurub waxay inta badan muujiyeen quudhsi ku wajahan dadka reer Yurubta Bari ee ku nool dhulalka ka soo fuula Poland ilaa jaranjarada Ruushka iyo Ukraine ilaa Balkans.
Xilligii fin de siècle (dabayaaqadii 19th iyo horraantii qarnigii 20aad) wuxuu ahaa dahabka dahabka ee waraaqaha sayniska Jarmalka iyo falsafadda.
Xilligu sidoo kale wuxuu ahaa da 'saboolnimo weyn Bariga Yurub.
Farqiga u dhexeeya labada dhinac ee Yurub siyaabo badan ayay isu muujiyeen. Galbeedka Yurub wuxuu ahaa hodan, dhaqan iyo casri.
Waxa run u ahaa guud ahaan bulshada Yurub, sidoo kale waxay ka run ahayd dunida Yuhuudda. Xoreyntii Napoleon ee Yuhuudda ee geetooyinka Faransiiska iyo Jarmalka waxay dhalisay in Yuhuuddu ku dhex milmaan bulshada reer Galbeedka Yurub.
Yuhuudda Galbeedka Yurub waxay ku hadlayeen afka ummaddooda waxayna qaateen hannaan dhaqameedyada Yurub. Kuwo badan ayaa wax ku bartay jaamacadaha ugu wanaagsan Yurub. Sida kiiska dadka waddankooda, Yuhuud badan oo reer Yurub ah ayaa u janjeera inay hoos u eegaan Yuhuudda Bariga Yurub. Tirada Yuhuudda Polish, Ruushka iyo Yukreeniyaanku waxay ahaayeen faqiir aan waxna ku baran luqadda iyo dhaqanka reer galbeedka. Waxay ku noolaayeen tuulooyin la yiraahdo shtetls (sida lagu tilmaamay “Fiddler on the Roof”). Yuhuudda Galbeedka Yurub iyo Ameerika waxay u arkeen walaalahood bariga inay calaamad u yihiin wax kasta oo ay doonayeen inay ka baxsadaan.
Waa qaaraddan kala qaybsan ee Yuhuudda weyn Faylasuufkii Jarmalka, Martin Buber (1878-1965), wuxuu qaatay qeybtii koowaad ee noloshiisa.
Intii lagu jiray tobannaankii hore ee qarnigii 20aad, Buber wuxuu ka mid ahaa falsafadihii Jarmalka ugu waaweynaa. Wuxuu la dhacay nolosha Yuhuudda ee Bariga Yurub wuxuuna u adeegay sidii buundadii isku xirtay labadan adduun.
Kahor soo bixitaankii Nazi -ga Jarmalka, Buber wuxuu ahaa borofisar wax ka dhiga Jaamacadda Frankfort wuxuuna ahaa qoraa aad u yaqaan Jarmalka iyo Cibraaniga labadaba. Falsafadiisii ​​caadiga ahayd ee falsafadda “Ich und Du” (Aniga iyo Adigu) ayaa weli laga akhriyaa adduunka oo dhan.
Dad badan oo naqdiya suugaanta iyo falsafada ayaa u tixgeliyey Buber inuu yahay nin weyn falsafadda qarnigii 20aad iyo fikirka bulshada. Shaqadiisa tacliimeed waxay saamayn weyn ku yeelatay dhinacyo kala duwan, oo ay ku jiraan cilmiga cilmiga dadka, cilmu -nafsiga falsafadda, iyo aragtida barbaarinta. Wuxuu kaloo ahaa turjumaan Kitaabka Quduuska ah. Turjumaadda Buuber iyo Rosenzweig ee Qorniinka Cibraaniga waa suugaan Jarmal oo caadi ah.
Buber wuxuu aad ula dhacay dunida Yuhuudda Bariga Yurub. In kasta oo saaxiibbadiis ay hoos u eegeen shtetl, Buber wuxuu ogaaday in meelaha bulshooyinkaas hoostooda ku yaal, ay yaallaan adduunyo bulsheed oo qoto dheer oo firfircoon, adduun aad u qallafsan oo bulsho ahaan aad u xeeldheer. Shaqadiisii ​​suugaanta ee caanka ahayd “Sheekooyinka Chassidic” kaliya sharaf uma siin bulsho la quudhsaday, laakiin waxay muujisay in fikirka falsafadda qoto dheer uusan ahayn gobolka keliya ee aqoonyahannada reer galbeedka.
Buber wuxuu nooleeyay ma aha oo kaliya dhinaca wadaagga nolosha shtetl laakiin sidoo kale xiriirrada ruuxiga ah ee uu la leeyahay Ilaah.
Buber “wuxuu nagu casuumay” nolosha shtetl. Wuxuu muujiyaa in tuulooyinkaas, in kasta oo ay ku liitaan badeecadaha adduunku, ay hodan ku ahaayeen caadooyinka iyo ruuxa.
Akhrinta shuqullada Buber waxaan u nimid inaan baranno in dadka lagu qasbay inay ku dhex noolaadaan saboolnimada iyo xag -jirnimada ay awoodeen inay u beddelaan rajooyin ficil iyo nacayb jacayl.
Waxaan ka akhrin karnaa Buuber “Sheekooyinka Chasidic” laba heer. Heerka koowaad, waxaan ka akhrinnaa sheekooyin dhaqameedyo ku saabsan dadka isku dayaya inay ku barwaaqoobaan adduun cadaawad leh, adduunyo oo kaliya badbaaday ayaa u dhow mucjiso. Heer aad u qoto dheer, waxaan ka helnaa falsafad casri ah oo akhristaha bara barashada farxadda xagga nolosha ee ku jirta quusta.
Intii hawsha Buber socotay, waxaan aragnaa sida dadka deggan shtetl ay u noqdeen shuraako Ilaah. Si ka duwan sida reer Galbeedka reer Yurub “qallafsan”, deggenayaashaan “aan qallafsanayn” iskuma dayin inay qeexaan Ilaah. Waxay si fudud ugu noolaayeen xiriir joogto ah oo ay la lahaayeen Ilaah. Dadka shtetl ayaa ereyada si aad ah u isticmaalay. Xitaa marka aad la hadlaysid Ilaah, shucuurta waxaa badanaa lagu muujiyaa muusigga “neegoon”: hees aan ereyo lahayn, oo heesahoodu ay ugu dhowaadeen Ilaah.
Martin Buber wuxuu aruuriyey halyeeyadaas, wuxuuna ku duudduubay baakad tacliimeed oo casri ah, wuxuuna ku kasbaday dareen ixtiraam dhammaan dunida reer Galbeedka.
Buugaagtiisa: “Hundert chassidische Geschichten” (Boqol sheekooyin Chassidic ah) iyo “Die Erzählungen der Chassidim” (Sheekooyinka Hasidic) waxay muujiyeen qoto -dheeraanta ruuxa ee saboolnimada dhexdeeda waxayna dunida u soo bandhigeen aragtiyo cusub oo ku saabsan xigmadda.
Wuxuu ku guulaystay inuu isku xidho caqiidada firfircoon ee Yuhuudda Yurubta Bari oo leh nolosha tacliimeed ee qallafsan ee Galbeedka casriga ah, wuxuu noo reebay su’aasha ah in kooxdu runtii ka roonayd?
Buber wuxuu tusay sida aqoonyahannada reer galbeedku u kala jabeen xaqiiqda, halka adduunkii shtetl ay ka jireen raadinta dhammaystiran. Buber wuxuu kaloo kashifay falsafadda reer Galbeedka fikradda tzimtzum: fikradda foosha rabbaaniga ah oo sidaas u oggolaanaysa quduusnimada kuwa caadiga ah. Akhrinta Buuber, waxaan aragnaa sida dadka deggan shtetls 'ay meel walba uga heleen Ilaah maxaa yeelay Ilaah wuxuu sameeyey meel ay dadku ku koraan.
Buber kuma ekaan sharraxaadda xiriirka ka dhexeeya aadanaha iyo Eebbe (bein adam la-makom) ee wuxuu kaloo galaa dunida xiriirka dadka dhexdooda ah (bein adam l'chaero).
Buber waa isdhexgalka dadka dhexdooda oo kaliya oo u abuuraya buste jaceyl iyo ka ilaalin qabowga nacaybka iyo eexda. Dunida Buber, ma jirto kala qaybsanaan siyaasadeed iyo ruuxeed, shaqo iyo duco, inta u dhaxaysa shaqada guriga iyo haybadda. Runta lagama helo waxa aan la garanayn, ee dahsoon laakiin sida muuqata, dhexgalka qofka iyo nolosha. Buuber wuxuu muujinayaa sida cilaaqaadyadani u beddelaan adduun aan qalbi lahayn oo iyagoo adeegsanaya caadooyinku nolosha ka dhigaan mid qiimo leh.
Sawirka Buber ee shtetl, qofna gebi ahaanba ma fiicna ama waa xun yahay. Taa bedelkeeda, waxaa jira raadinta teshuvah, leexashada iyo ku noqoshada Eebbe iyada oo wadar ahaan qofku yahay.
Buber ayaa noo soo bandhigaya, sida Sholom Aleichem oo aan wax ka qoray bishii hore, dadka caadiga ah ee Ilaahay ka hela hab -nololeedka caadiga ah. Shakhsiyaadka Buber ma gaaraan meel ka baxsan aadanaha, laakiin waxay ku noolaadaan noloshooda si ay bani -aadamnimo ugu xirmaan Ilaah. Buber wuxuu tusaale u yahay ficilkan iyada oo loo marayo shakhsiyadda tzadik (hoggaamiyaha ruuxiga ah iyo wadaagga). Tzadik wuxuu maamuusay maalin kasta, wuxuu ka dhigay mid quduus ah, iyada oo mucjisada ah quduus looga dhigayo jadwalka daallan ee aan xiisaha lahayn ee nolosha.
Qoraallada Buuber waxay tilmaamayaan adduun aan jirin.
Waxaa burburiyey nacaybka Naazi Yurub iyo baddeeda cuqdadda leh, waxaa noo haray wax ka badan sheekooyin, laakiin kuwani waa sheekooyin nolosha qiimo u leh, waxaana sabab u ah falsafadda reer Jarmal ee caqliga leh ee Jarmalka ka qaxday oo noloshiisii ​​dib u aasaasay reer binu Israa'iil, inaan annaguna quduus ka dhigno kuwa caadiga ah oo aan Ilaah ka helno wax kasta oo aan samaynno.
Peter Tarlow is rabbi emeritus ee Texas A&M Hillel Foundation ee Saldhigga Kulliyadda. Wuxuu wadaad u yahay Waaxda Booliska Saldhigga Kulliyadda wuxuuna wax ka dhigaa Kulliyadda Caafimaadka ee Texas A&M.